Ogeysiis iyo Wagelin Muhiim ah oo ku socota Akhristayaasha Sharafta leh ee K24 – Kismaayo24 News Agency Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/8/7/9/kismaayo24.com/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284
Ogeysiis iyo Wagelin Muhiim ah oo ku socota Akhristayaasha Sharafta leh ee K24
Arimaha Bulshada Somali News Xulashada K24
by admin 30th October 2015 30th October 2015 095
Wargelin Muhiim ah:-
Maamulka iyo Hawl-wadeenada Shabakadda wararka ee Kismaayo24 waxay Macaamiishooda Sharafta leh uga cudur-daaranayaan shaqa gaabiska aheyd ee dhawaanahan ku timid webka Kismaayo24.
anagoo og in Macaamiisheena Sharafta leh ay mudooyinkii dambe ka maqneyd il wareed muhiim u aheyd inbadan oo bulshada Soomaaliyeed ah, ayaan ku wargalineynaa Akhristayaasheena Sharafta leh inaan dib u hawl-galinay shaqadiine ay si toos ah u bilaabaneyso wixii maanta ka dambeeya.
Bahda Kismaayo24 waxay diyaar idiin layihiin helitaanka akhbaaraadka kajira dalka Gudihiisa iyo Dibadiisaba, meesha Kama marna Xogihii iyo warbixinadii Gaarka inoo ahaa ee aad inooga barateen inaad ka heli doontaan mareegta Kismaayo24.
Dhinaca kale waxaan saxiibada kutaxan webkeena ku wargalineynaa si toos ah noogu soo diri kartaan wararka, xogaha, Muuqaalada iyo masawirada aad jecleystaan inaad nala wadaagtaan inagune waxaan balan qaadeynaa inaan bulshada usoo gudbino insha allah.
waxaad si toos ah Faalooyinka iyo Warbixinada aad rabtaan inaad nala wadaagtaan, aad noogu soo diri kartaan qaybta Contact us-ka
Wada shaqeyn wacan ayaan idinka rajeyneynaa.
SAWIRO -:Shir looga hadlayey xaalada dalka Soomaaliya oo lagu qabtay Amsterdam
Degdeg: Gudoomiye Kaliil oo Gudoomiye Cusub u magacaabay Degmada Garbaharay
Daawo: Madaxweyne Xaaf oo odayaasha Galmudug la qaatay kulan xasaasi ah oo Diiradda lagu saaray…..
admin 12th November 2017
admin 19th March 2016